သမ္ဗုဒ္ဓေ ပါဠိ ဘာသာပြန် | မေတ္တာရိပ်
← အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓကိတ္တိသာရ စာအုပ်များ
ပညာရှိ နှင့် သူမိုက် ခွဲခြားနည်း →
သမ္ဗုဒ္ဓေ ပါဠိ ဘာသာပြန်	Posted on August 17, 2009	by mettayate သမ္ဗုဒ္ဓေ သမ္ဗုဒ္ဓေ အဋ္ဌ၀ီသဉ္စ၊
နှစ်ကျိပ်ရှစ် (၂၈) ဆူကုန်သော ဘုရားရှင်တို့ကို လည်းကောင်း၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကုန်သော ဘုရားရှင်တို့ကို လည်းကောင်း၊ ငါးသိန်းကုန်သော ဘုရားရှင်တို့ကို လည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဦးခေါင်းရတနာဖြင့် ရှိခိုးပါ၏။
အပ္ပကာ ၀ါဠုကာ ဂင်္ဂါ၊
ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်းမှာရှိကြသော သဲလုံးတို့က နည်းကြပါသေး၏။ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားကြသော ဘုရားရှင်တို့ကား ရေတွက်ပိုင်းခြား၍ပင် မရနိုင်ပါ။ ထိုများပြားလှသော ဘုရားရှင်တို့ကို လည်းကောင်း၊ ထိုဘုရားရှင်အားလုံးတို့၏ တရားတော်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုဘုရားရှင်အားလုံးတို့၏ တပည့်သံဃာတော်များကိုလည်းကောင်း၊ အကျွန်ုပ်ရိုသေစွာ ရှိခိုးပါ၏။
ဟိတွာ သဗ္ဗေ ဥပဒ္ဒဝေ။
ဤသို့ရှိခိုးပူဇော်ရသော ကုသိုလ်စေတနာကြောင့် ခပ်သိမ်းသောရန်တို့ကို ပယ်ပျောက်ပြီး တစ်ပါးမက များပြားလှသည့် အန္တရာယ်ဟူမျှတို့ အကြွေးကျန်မရှိ ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ ကင်းပျောက်ပါစေကုန်သတည်း။
This entry was posted in ပါဠိ ဘာသာပြန် and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓကိတ္တိသာရ စာအုပ်များ